देउती अस्पतालले पत्रकारहरुलाई उपचार शुल्कमा १० हजार बराबर छुट दिने - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ कर्णाली प्रदेश ∕ देउती अस्पतालले पत्रकारहरुलाई उपचार शुल्कमा १० हजार बराबर छुट दिने
देउती अस्पतालले पत्रकारहरुलाई उपचार शुल्कमा १० हजार बराबर छुट दिने
चन्द्रा कँडेल सोमबार, २०७८ वैशाख १३ गते, १२:५९ मा प्रकाशित
सुर्खेत – सुर्खेतस्थित देउती अस्पताल प्रालिले सुर्खेतमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई उपचार शुल्कमा १० हजार बराबरको छुट दिने घोषणा गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको समन्वयमा देउती अस्पतालले आइतवार उपचार शुल्कमा १० हजार बराबरको उपचार खर्चमा छुट दिने घोषणा गरेको हो ।
अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक डा. लोकेन्द्र थापाले पत्रकारहरु पनि समाजमा हरेक घटनामा अग्रपंक्तिमा खटिने भएकोले महासंघ सुर्खेत शाखाको समन्वयमा सुर्खेतका पत्रकारहरुलाई उपचार सेवामा १० हजार बराबरको छुट दिइने बताए । उनले पत्रकारहरुसँग देउती अस्पताल सहकार्य गरेर जान चाहेकोले यो घोषणा गरेको उल्लेख गरे ।
केही दिनभित्र महासंघ र अस्पतालवीच सो सम्वन्धमा लिखित सहमति गरिनेछ । प्रवन्ध निर्देशक डा. थापाले प्रदेशमै पहिलो पटक ३२ स्लाइसको सिटी स्क्यान सेवा संचालन गरिएको, गुणस्तरीय ल्याव सेवा समेत संचालन गरिएको जनाए । साथै आईसियु र भेन्टिलेर सेवा पनि केही दिनमै संचालन गरिने उनको भनाइ छ ।